Erayada adag ee Yaman ee ku saabsan TÜVASAŞ | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYaman hadalo adag oo ku saabsan TÜVASAŞ
27 / 04 / 2012 DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Cemal Yaman, oo ah guddoomiyaha Ururka Midawga Shaqaalaha ee Demiryol-Iskaashatada, oo ahaa marti-galiye barnaamij raadiyaha, wuxuu ka dhigay qoraal muhiim ah oo ku saabsan TÜVASAŞ wuxuuna ku dhexjiray siyaasiyiinta. Halkaan waxaa ah Cemal Yaman oo ah bayaankiisa:
"Xafiisku wuxuu ka shaqeynayaa Adapazari tan iyo 1952. 350 wuxuu leeyahay meel ka mid ah hal kun oo m2. 200 m2 ayaa lagu rakibay aagga hoyga. Si kale haddii loo dhigo, 550 waxay sii wadaysaa hawlaheeda kun kun M2. Halka Tüvasaş ay ka timaaddo oo ka tirsantahay nambarada si fiican loo baaro.
"Warshadu wax dhibaato ah ma hayso"
Siy Waxaa jira fikrad ah in siyaasiyiinta ay doonayaan in ay soo saaraan warshadda balse waxaan dareemeynaa raaxo la'aan. Waxba ...
Tirada shaqaalaha ee warshadani waxay ku dhacday 750. 1500 waxay ka shaqeysaa halkan, xitaa haddii loo shaqeeyo. Warshadu maaha inay ka walwasho koritaanka. Waxaa jira yaraanta shaqaalaha ...
Shaqaale Haddii aad wax wanaagsan samayso, shaqo u hesho "
Haddii wakiillada Sakarya ay doonayaan inay u sameeyaan Adapazari, Tüvasaş waa inaysan u dhaqaaqin. Dhibaatada ugu wayn ee warshadani maaha shaqeyn, maaha meel muuqaal ah, hoos u dhaca tirada shaqaalaha ah X Sanad walba 40 ayaa ka fariistay. Dadka 400 way sii socdaan haddii ay baxaan. Haddii ay doonayaan inay kor u qaadaan warshadan, ka dibna waxay shaqaaleeyaan shaqaale halkan. Ma jiro wax kale oo ...
Labada shaqaale waa in la qoro oo 24 laga sameeyaa Xafiiska Goobta Adeegga Gobolku. Boliiska Bulgaria ma ahan kuwo ku filan. Barnaamijyo badan ayaa la soo saaraa. Waa arrin aad u culus in warshadda loo keeno ajendaha ku yaal deegaan aan barnaamijka ahayn.
"Aan sii noolaanno"
Haddii wakiillada Sakarya ay doonayaan in warshadani ay si aad u badan u dhaqaaqdo, waa inay yimaadaan oo ay si cad uga dhaadhiciyaan barnaamijka TV-ga oo ay ku noolaadaan. Ha noo ogolaanayaan in ay nala soo socodsiiyaan, waxaanu ku martiqaadaynaa dhinacyada danaynaya, oo noo sheeg fikradaha wajigaaga. U sheeg in ay doonayaan in ay guuraan ama aysan ahayn.
"Dhibaatooyinka joogaya ajandaha"
Dhulgariirkii ka dib, bilyan doolar ayaa lagu kharash gareeyey aasaasida warshadan. Kuwani waa lacagta dadka. Ma dooneyno inaan mas'uul ka nahay inaan waxyeeleyno hantida gobolka, hadda waa la baaray. Kuwa doonaya inay ka guuraan Tüvasaş waa inay dadka u sheegaan waxa dhibaatooyinkoodu yihiin. U oggolow inay bixiyaan sababahooda waxayna ku sharxi doonaan sababaheena. Ma jirto wada tashiyo. Ma jiraan sababo muhiim ah, oo dareenkooda waa inay sii joogaan ajandaha. Dadku way ka daaleen arrinka Tuvasas. Daryeelka shaqada hadda. Waxay doonayaan inay xiraan dhibcood waxayna helayaan dhibco. Tani wax faa'iido ah ma leh qof.
"Waxaan la soconaa kun qof, ma ahan dadka 30"
Labada wasiir ee gaadiidka iyo TCDD labaduba maahan kuwo wanaagsan. Anigu ma fahmin waxa dhacaya SATSO ...
Xeerka Gaadiidka Turkiga iyo Xafiiska Turkiga Sen, 2 oo ah urur shaqaaleed shaqaale ah, ayaa qeylinaya, waxaan ku socon doonaa Ankara ". Haddii aad socotid xaafada, kuma raacaan qofka 30 sida adiga, laakiin qofka 1000. Socodka, jebinta ama soo daadi ma aha meel lagu ciyaaro.
Mi Ma kula tahay inaad tixgeliso qandaraaslayaasha iyo qandaraaslayaasha? "
Xildhibaannadu waxay sharxaan haddii Tüvasaş uu rabo in uu noolaado ama uu kudhaco. Ma jiraan wareejin si looga fekero qandaraaslayaasha iyo qandaraaslayaasha.
Waxaa jira shirkadaha 2 ee Pamukova. 2 waxay dhistay warshad cusub. U daa inay marka hore ka saaraan bulashada. Wuxuu go'aansaday inuu burburiyo 2000. Aziz Duran ma dalban. Waxaa jira muuqaal fool xun ... Laakiin ma jirto sawir fool xun ee Tüvasaş.
Miyaanan ahayn khiyaano a
Saraakiisha Eurotem ayaa ii yimid. Wax dhibaato ah kuma qabaan inay tagaan Ferizli. Ferizli, dabcan, dhulkii hooyo ... Laakiin ku xigeenkii Ayhan Sefer Ustun ama Hasan Ali Celik ayaa sheegay in aan dooneyno in aan warshadda u wareejinno Ferizli taas, noo sheeg in sababta ay tahay sabab weyn, sax? Ma ihi khiyaano. Waan jeclahay Ferizli.
Sana ma kuu tahay inaad hanuunto? "
Hawlaha mudaaharaadyada ee shaqaalaha ururada shaqaalaha ayaan waxtar yeelan. Qaadista qandaraaslaha ilaa Ferizli ma xalin doonto. Ayhan Sefer Üstün qandaraaslaha ama ku-xigeenka dadka? Miyuu isaga u gudbiyaa qandaraaslayaasha iyo qandaraaslayaasha? "
Nemruta Teleferik Waa Lagu Heli Karaa Horumarinta Adiyaman
Adiyaman oo isku xirta Nissibi Bridge ilaa Diyarbakir
Taşdar, Nemruta Teleferik Waa Inay Horumariyaan Adiyaman
Wasiirka Gaadiidka Arslandan Adiyamana injiilka kor loo qaado
Korontada cabsida leh ee baabuurta tareenka ee Adiyaman
Goobta labaad ee Adiyaman, buundada ayaa la furayaa bisha May
Ereyada ka timid Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Madaxweyne Sekmen
La xiriir Cemal si toos ah
Ku soo dhawoow Ankara si ay TÜVASAŞ
Tareenka rakaabka ayaa raacaya Batman
Izmir Karşıyaka Shuruudaha Wadooyinka iyo Wadooyinka RAYHABER Waxay ku siisaa jidadka ugu fudud iyo xaalada wadada ee aad kula tegi karto khariidad waddo oo toos ah. Xarunta Izmir iyo kuwa kale [More ...]
Erayo culus oo ka yimid TCDD ilaa İZBAN
Ereyada la siiyay saldhiga Çumra
Wasiirka Ahmet Arslan, indhaha ayaa ka sarreeya culayskeena
Muxuu yahay 10 sannad-guuradii xarunta tababarka ee Haydarpasa